ပဲခူးကို​ရောက်​လာတာ ဆရာမ Abby Hester ​တစ်​​ယောက်​တည်းမဟုတ် . . ဒီဆရာလည်းပါတယ်​ – Tameelay
ပဲခူးကို​ရောက်​လာတာ ဆရာမ Abby Hester ​တစ်​​ယောက်​တည်းမဟုတ် . . ဒီဆရာလည်းပါတယ်​
ပဲခူးကို​ရောက်​လာတာ ဆရာမ Abby Hester​တစ်​​ယောက်​တည်းမဟုတ်​ဘူး​လေ
Fb account နာမည် Aung Thihaနဲ့သုံးပါတယ်
( https://web.facebook.com/profile.php?id=100020505270277 )
ပဲခူးကို​ရောကျ​လာတာ ဆရာမ Abby Hester​တဈ​​ယောကျ​တညျးမဟုတျ​ဘူး​လေ
Fb account နာမညျ Aung Thihaနဲ့သုံးပါတယျ
မြန်မာ တွေဟာ ဘာလို့ ဇရာကို စောစောစီးစီး အရှုံးပေးနေရတာလဲ ?
ဦးခိုင်ထူး သတင်းဖတ်ရတယ်….. ဘောလိဝုဒ်မင်းသား အမီယာခန်း (PK) အသက် ၅၀ ကျော်နေပြီ ခုထိ လူငယ် အခန်း ရိုက်ကောင်းနေတုန်းGym ဆော့ကောင်းတုန်း ဗလ ကလဲ လူငယ်တွေနဲ့ ယှဉ်လို့ရတယ်ရှရွတ်ခန်း ဆိုရင် ဒွေးနဲ့ ခေတ်ပြိုင်တောင်မဟုတ်ဘူး။ ဒွေးထက် စောတယ်။ ဒွေး သေလို့ အရိုးဆွေးနေပြီ။ရှရွတ်ခန်း …
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ – ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၉ မှ ၁၅ ထိ
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲသာလုပ်ပေတော့။ ငွေအားလူအားရှိသလောက် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ၀င်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း အလွန်ရွှင်နေမယ်။ ဟိုက၀င် …
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ….!
ဓာတ်လိုက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့လျှင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံးသွားရပါမယ်။ ၁။ လျှပ်စီးကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှဝေးသောနေရာသို့ လူနာကိုရွေ့ပါ။circuit breaker, fuse box(သို့)Outside Switch တို့မှတဆင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဖြတ်တောက်ပါ။မီးမပိတ်နိုင်လျှင် လျှပ်စစ်မစီးကူးနိုင်တဲ့ သစ်သားပြား၊ ပလပ်စတစ် တံမြက်စည်းရိုး၊ သစ်သားထိုင်ခုံ၊ ရာဘာခြေသုတ်ခုံတို့ကိုအသုံးပြု၍ဓာတ်လိုက်နေသူကို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းမှ ဖယ်ထုတ်ပါ။ အကူအညီပေးလာသူရဲ့ ခြေထောက် (သို့) ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက …